Tuesday, 15 May 2012 11:50	नागरिक
गाउँले बलदेव -'हामी प्रुफ रिडरहरूको जागिर जाने भयो! हामी स्कुले मास्टरहरूको मुखमा माड नलाग्ने भयो! हामी विद्यार्थीहरूले परीक्षाको भिरबाट गुल्टिनुपर्ने भयो!' अचेल जहाँ गयो, यस्तै चित्कार र हाहाकार गुन्जिन्छ। तिनको मर्म कसले सुन्ने? सरकारी निकाय कानै सुन्दैन।
Tuesday, 15 May 2012 11:47	नागरिक
परशु प्रधान - लगभग चालीस वर्षअगि म अमेरिकामा थिएँ र न्युयोर्कबाट देश फर्कन लाग्दा सोचेको थिएँ- अब केही महिनापछि फर्कनुपर्ला। तर यत्रा लामा वर्षहरूबीच मौका जुरेन। अहिले लाग्छ- सायद यो जुनीमा म फेरि अमेरिका पुग्दिनँ!
विवश वस्ती - नीलम कार्की 'निहारिका' कथामा सामाजिक एवं पारिवारिक तहमा गहिरिँदै गएको नैतिक संकट, ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति र स्खलित चेतना निसंकोच उतार्न चाहन्छिन्। स्वार्थ, कुण्ठा, महत्त्वाकांक्षा र आत्मप्रवञ्चनाको डोरीमा अल्भि्कएर अचेलका मानिसले जसरी मानसिक, आत्मिक र नैतिक स्वत्व गुमाइरहेका छन्, उनका कथाले त्यस्ता मनुष्यप्रति तिख्खर असहमति जनाउने साहस जुटाएका छन्। तसर्थ उनी पटक-पटक त्यही विन्दुमा फर्किन चाहन्छिन्, जहाँ जीवनदृष्टि, मूल्य र सम्बन्धको तीव्र गतिमा क्षरण भइरहेको छ।
Sunday, 13 May 2012 13:52	नागरिक
दिपेश घिमिरे— म्याक्सिम गोर्कीको आमा पढेर संसारमा कयौं व्यक्ति क्रान्तिकारी भएका छन्। नेपालमै पनि मोदनाथ प्रश्रितको साहित्य पढेर धेरै नेपाली क्रान्तिमा लागे। साहित्यले मान्छेलाई क्रान्तिकारी बनाएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। तर 'खान पुगोस् दिन पुगोस्' स्तम्भ निबन्ध संग्रहले मान्छेलाई क्रान्तिकारी होइन कल्याणकारी बन्न प्रेरित गरेको छ। यही पुस्तक पढेरै सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत रवीन्द्र बस्नेतले ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ मानवीय कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि खर्चने भएका छन्।
खाँदै, खेल्दै, ध्यान
Sunday, 13 May 2012 13:08	नागरिक
रोहन सुवेदी—सात नबज्दै हामी बुढानिलकण्ठ मुहानपोखरीस्थित नेपाल विपश्यना केन्द्र पुग्यौं। विपश्यना ध्यान केन्द्रमा हुने बाल आनापाना बाल शिविरमा भाग लिन विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी गएका थिए। मोडर्न इन्डियन, मल्पी, त्रियोग, सूर्योदय, सनसाइन, अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल स्कुलका।
Wednesday, 09 May 2012 18:27	नागरिक
पत्रपत्रिकामा आइसकेका सामग्री पुस्तकमा हुबहु छापेर बेच्ने 'कर्पोरेट' शैलीले बिस्तारै नेपाली साहित्यलाई कुरूप बनाउँदो छ।
Wednesday, 09 May 2012 18:26	नागरिक
मेरो कुनै कथासंग्रहले नबिकेर प्रकाशक र सम्पादकको स्टोरमा थन्किनुपरेन, न त वितरकको दराजमा सड्नु नै पर्‍यो। मैले कहिल्यै आफ्ना कृतिको स्टक सिध्याउन चिनेजानेकालाई बाँड्दै हिँड्नु पनि परेन